Sunday October 25, 2020 - 09:49:34 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya wadanka Suuriya ayaa sheegaya in duqeyn xagga cirka ah oo ka dhacday waqooyiga wadankaas lagu xasuuqay dad shacab ah oo aan waxba galabsan.
Diyaarado nuuca aan duuliyaha laheyn ah oo ay leedahay dowladda Mareykanka ayaa dad badan oo shacab ah ku xasuuqay deegaanka Jaakaara ee gobilka Idlib una dhow xuduud beenaadka ay wadaagaan Turkiga iyo Suuriya.
ilo wareedyo ayaa sheegaya in duqeyntu ay beegsatay goob ay ka dhacaysay munaasabad caruus ah waxaana ku sugnaa dad isugu jiray qeybaha kala duwan ee bulsahda sida odayaal,dhalinyaro iyo xoogaga sunniga ah ee suuriya ka halgama.
War rasmi ah oo kasoo baxay hay'adda Taxriiru shaam ee maamusha waqooyiga Suuriya ayaa lagu sheegay in dadka duqeynta lagu laayay ay ahaayeen shacab aan waxba galabsan.
Xasuuqan bahalnimada leh waxaa mas'uuliyadeeda sheegatay dowladda saliibiyadda Mareykanka, war kasoo baxay taliska dhexe ee ciidanka Mareykanka ayaa lagu sheegay in ay dileen dagaalyahanno katirsan Qaacidatul jihaad.
Mareykanka oo isku dayaya in uu qiil uyeelo xasuuqan foosha xun ee uu ka geystay dalka suuriya ayaa ku andacooday in ay dileen xoogag jihaadiyiin Al Qaacidda ah.
Wariyaal ku sugan gobolka idlib waxay sheegeen in shacabka la xasuuqay ay dhiganayeen munaasabad, xoogaga sunniga ah ee Suuriya ka dagaallama ayaa weerarkan bahalnimada leh aad ucambaareeyay.
Ragga firfircoon ee soo tabiya dagaalka Suuriya waxay sheegayaan in dadka la xasuuqay ay kamid yihiin carruur iyo haween.
Mareykanka ayaa caan ku ah in uu xasuuq ka geysto wadamada caalamka islaamka ee jihaadku ka socdo sida afghanistan,soomaaliya,Yemen iyo suuriya